Multi-functional hoist သည်လျင်မြန်သောဘရိတ်အမြန်နှုန်း၊ သေးငယ်သောအသံ၊ အလေးချိန်၊ ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းတွင် 300-600kg, 400-800kg, 500-1000kg 750-1500KG, 1T-2T, ဝါယာကြိုးအရှည်ကိုဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်များအတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Multi-functional Hoist ကိုလူနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပြာအုတ်၊ ကုန်တင်ကုန်ချကုန်လှောင်ရုံ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စက်ရုံငယ်များ၊ မည်သည့်ရှုထောင့်ကမဆိုရွေ့ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ပိုကောင်းသောသေးငယ်သည့်မြှင့်တင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
KCD အမျိုးအစားလျှပ်စစ်လွှင့်တံကောက်သည် ၀ င်ပေါက်၏မြင့်မားမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုစသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောလျှပ်စစ် winch တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဤ winch ကိုလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များအတွက်သုံးသောပြာများအုတ်များ၊ မြေဆီများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စက်ရုံများနှင့်မိုင်းများ၊ မြေကြီးသယ်ရန်ကောင်းစွာတူးပါ၊ မည်သည့်မည်သည့်ရှုထောင့်မှမဆို၊ တင်ခြင်းနှင့်တင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပါ။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်း၌အသေးငယ်ဆုံးမြှင့်တင်ရေးကိရိယာများအဖြစ်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားအိမ်များ၊ အလှဆင်ရန်အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး များ၊ ကြမ်းပြင်ကိုတူး။ ရေသယ်နိုင်သောမြေကိုတူးခြင်း၊ ၎င်းသည်စက်ရုံနှင့်ကုန်လှောင်ရုံများတွင်သုံးသောစက်ယန္တရားများဖြစ်သည်။ နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ
Lifting Speed ​​(မီတာ/မိနစ်)
AC 60HZ ဖြစ်သည်
ဝါယာကြိုးသတ်မှတ်ချက် D-6X ၁၉-၆.၂ D-6X ၁၉-၅.၁
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) ပေါင် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်
ပို့ဆောင်ချိန်: ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းပြပွဲများအတွက် အမှာစာများအရ၊ ပို့ဆောင်ချိန်သည်ရက် ၃၀ မှ ၅၅ ရက်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အထွေထွေပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း (သို့) စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း
ကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်သော forwarder ။
ဒုက္ခဖြစ်စဉ် အကြောင်းပြချက် ဖြေရှင်းရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်
No-loading motor သည်မရွေ့ပါ၊ ဆွဲတင်နေသော motor သည်ရွေ့လျားခြင်းမရှိသော်လည်း roller drum မရွေ့ပါ။
အာဏာသို့မ ၀ င်ရ
မော်တာကိုအစားထိုး (သို့) ပြုပြင်ပါ
one phase ဓာတ်အားပြတ်တောက်သည်
ဖိအားနွေ ဦး ပျက်ကွက်
ဘရိတ် ၁. ဘရိတ်၏ကွာဟချက်ကိုရှင်းပစ်ပါ၊ ဖိအားဘရိတ်၏ ၂ နေရာကိုအစားထိုးပါ
Rolling drum (သို့) reducer ၏အသံသည်ပုံမှန်မဟုတ်
ဂီယာသို့မဟုတ်ပြသနာ ၂.reducer ဆီမရှိခြင်း ၃။ ကူရှင်ရော်ဘာပျက်စီးခြင်း ၄။
ချက်ချင်းပြုပြင်၊ ပြုပြင်၊ အစားထိုးပါ
Hoist အဖုံးတွင်လျှပ်စစ်မီးရှိသည် အဖုံး 2.Safe ground cable ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုမရှိပါ 1. မော်တာကိုစစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်အစားထိုးပါ
ယခင်: ၁၀၀% မူရင်းစက်ရုံ ၆ တန် Chain Fall - HSH လီဗာတုံး - Juren
နောက်တစ်ခု: CD/MD လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကြိုးလွှင့်ထူသည်
12v Lifting Hoist များ
2000 Lb လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူစက်
လျှပ်စစ် Lever Hoist
ချာတိတ် Chain Hoist
လျှပ်စစ် Chain Hoist ကိုသုံးသည်
Jet 1.5 Ton Chain Hoist, Lever Puller ဖြစ်သည်, Bannon လျှပ်စစ် hoist, အသေးစားလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကြိုး, Manual Lever Chain Hoist, လျှပ်စစ် Lever Hoist,